Beelink GT-KING PRO 2021 miaraka amin'ny Wi-Fi 6 | TeraNews.net
Beelink GT-KING PRO 2021 miaraka amin'ny Wi-Fi 6
mpanoratra Nikitin Eugenius Navoaka tamin'ny 22.02.2021
Cool TV-BOX - Beelink GT-King PRO, nitsidika ny famerenantsika herintaona lasa izay. Noho izany dia nahagaga ny vokatra vaovao niseho teny an-tsena tamin'ny marika sinoa. Atolotra antsika hividy Beelink GT-KING PRO 2021 miaraka amin'ny Wi-Fi 6, izay aseho ho toy ny gadget vaovao. Mazava ho azy fa nanjary tena nahaliana ilay tena niavaka momba ilay console vaovao, izay notadiavin'izy ireo hatramin'ny $ 150.
Famaritana Beelink GT-KING PRO 2021 miaraka amin'ny Wi-Fi 6
Ny toetra mampiavaka an'ity TV-Box ity dia hita eto, satria nijanona tsy niova ny fitaovana. Amin'ny ankapobeny, mahamenatra ny mpivarotra ao amin'ny magazay sinoa manoratra momba ny fampitomboana ny zana-kazo fiasan'ny kristaly avy amin'ny 1.8 ka hatramin'ny 2.2 GHz. Vaovao tsy marina ity. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny fitaovana dia ny fanohanana ny Wi-Fi 6. Na ny seranan-tsambo SPDIF, ny tsy fisian'ireo mpankafy marobe marika nanoratra momba azy ireo, dia tsy nipoitra mihitsy tamin'ny vokatra vaovao.
Saingy ny ampahany amin'ny lozisialy dia niova be ho amin'ny tsara kokoa. Ary misy fiantraikany bebe kokoa amin'ny kalitaon'ny famokarana feo amin'ny endrika samihafa. Ankoatr'izay, ny tompony dia tsy mila mamorona na inona na inona amin'ny fametrahana fampiharana. Izany rehetra izany dia mivoaka ivelan'ny boaty, izay mety amin'ireo vao manomboka izay tsy mahay amin'ny fitaovana toy izany. Miresaka fanohanana an'i Dolby Audio, DTS Listen, audio fantsona fito sns izahay.
Ary fotoana iray mahafinaritra kokoa izay tian'ny mpanjifa ny fisian'ny fanaraha-maso lavitra mangatsiaka indrindra ao anaty kit. Farafaharatsiny tafiditra ao anatin'izany ny volantsika $ 150 G20S PRO, lamosina, gyroscope ary fikarohana amin'ny feo. Ho an'ireo izay te hahalala ny Beelink GT-KING PRO 2021 vaovao miaraka amin'ny Wi-Fi 6, dia mamporisika anao izahay hijery ny famerenana video ny fantsona TECHNOZON etsy ambany.
Paty instant ASUS ROG - ahoana no itiavanao an'ity, Elon Musk?
REDRAGON Libra milalao mat miaraka amin'ny ondana - topimaso
Inona no entinao amin'ny fitsangatsanganana: lisitry ny zava-dehibe
Apple iPhone SE 2022 dia afaka mamerina ny niafaran'ny iPhone Mini
Netflix - efa manana mpanjifa 200 izahay
Hyundai Santa Fe Inspiration 2018: mampihomehy amin'ny Koreana
Ny andiany fandaharana ho an'ny ady totohondry TV: fandinihana, soso-kevitra
JBL Charge 4 - mpandahateny mafy amin'ny Power Bank